Fiitamiinnada iyo nafaqooyinka fardaha u baahan, waa kuwee kuwa muhiimka ah? | Fardaha Noti
Fiitamiinnada iyo nafaqooyinka fardaha
Jenny monge | | Fardo, Caafimaadka iyo daryeelka
Dunida xayawaanka, mid kasta oo ka mid ah noocyadu waxay u baahan yihiin tabaruc dheellitiran oo nafaqooyin ah si ay si habboon u horumariyaan, si ay u awoodaan inay u qabtaan howlo maalmeedka ugu dambayntiina caafimaad qab. Farduhu waa ka reeban yihiin waxayna u baahan yihiin qaadashadooda fiitamiinno iyo nafaqooyin kale si ay u noqdaan kuwo caafimaad qaba.
Markii aan ka hadlayno nafaqooyinka waxaan tixraaceynaa qaybo gaar ah oo muhiim u ah sida borotiinada, macdanta, biyaha, fiberka, fiitamiinnada, iwm. cunto isku dheeli tiran ayaa lagama maarmaan ah.
Aynu aragno kuwa iyaga ka mid ah ee muhiimka u ah isku midkeenna.
1.5 Fiitamiin D
1.7 Fiitamiin K
3 Sidee loo ogaadaa haddii faraskeenu u baahan yahay fitamiin?
Suuqa waxaan ka heli karnaa tiro badan oo fiitamiin ah oo loogu talagalay fardaha. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaanan bilaabin inaad siiso xoolaheena, waxaa muhiim ah in nala soo wargeliyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin, waxa loogu talagalay iyo haddii faraskeenu runtii u baahan yahay.
ka fitamiinada waa nafaqada ugu badan ee la iibiyo marka lagu qaato daawooyinka nafaqada leh, tani waa sababta oo ah waa la xiriirta yaraynta cudurada faraska. Laakiin, marka lagu daro inuu yahay iibiyaha ugu fiican, waa midka loo isticmaalo kan ugu xun.
Aad bay muhiim u tahay in la ogaado taas oo leh cunto isku dheellitiran waa inaysan daruuri noqon in la doorto kaabis marka laga reebo xaaladaha qaarkood ama xilliyada qaar shaqo ama jimicsi weyn. Haddii xayawaankeennu u baahan yahay tabarucaad dheeri ah, sida caadiga ah, waxaa loo caddeyn doonaa si uun. Marka laga hadlayo rabitaanka in la bixiyo kaabis laga filayo kororka jimicsiga ama shaqada faraskayaga, way fiicantahay la tasho xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha ka hor intaanan nafteena u bilaabin inaan maamulno kaabis, maadaama fiitamiinno ama nafaqooyinka qaarkood ay waxyeello yeelan karaan.
Fiitamiinnada ayaa ah iskudhisyo dabiici ah oo aan ka heli karno in loo qaybiyo laba qaybood hadba sida ay u kala milan yihiin: dufanka ku milma ama ku milmi kara (Faytamiinnada A, D, E iyo K) iyo biyaha ku milma ama biyaha ku milma (Vitamin C, kooxda B) iyo inta soo hartay). Kuwii hore waxay leeyihiin tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah iyo dufan dufan ah, halka kuwa dambe si dhakhso ah looga tirtiro kaadida, taas oo ka dhigaysa inay sun yar yihiin.
Hadda, Fiitamiino noocee ah ayaa lagama maarmaan u ah ilaalinta caafimaadka iyo waxqabadka fardaha?
Fiitamiinkan ayaa caan ku ah doorka muhiimka ah ee aragga, laakiin sidoo kale, waa mid aad muhiim u ah kala duwanaanta unugyada, taranka foosha, embryogenesis, dhalashada iyo horumarka iyo, sida in waxaas oo dhammi ayan ku filnayn, waxay faragalin ku sameysaa ka hortagga cudurada.
Waa muhiim inaad fiiro gaar ah u yeelato xad-dhaaf ah fiitamiinkan ayaa waxyeello u leh lafaha, iyaga oo ka dhigaya kuwo jajaban, sidoo kale wuxuu keenaa teratogenesis iyo exfoliation of epithelia.
Sida aan aragno, wax walba waxay kufiicanyihiin cabirkooda saxda ah, markaa muhiimada ay leedahay hubinta waxa iyo goorta aan siinayno xoolaheena iyo la-tashiga xirfadlayaasha.
Faytamiin A waxaa laga heli karaa cuntooyinka qaarkood sida pro-vitamin A (retinol, beta-carotene) oo markii la cuno loo beddelo fiitamiin A. Cuntooyinkan waa forages gaar ahaan markay cagaaran yihiin.
Sidoo kale loo yaqaan thiamine, waa lagama maarmaanka u ah murqaha oo sidaas awgeed waxay la xiriirtaa metabolism-ka carbohydrate. Yaraansho fiitamiinkan waxay ku lug yeelan kartaa isku-duwidda muruqyada, gariir, cunto xumo iyo waxa ay u baahan tahay miisaan lumis.
Halkee laga helaa fiitamiinkan? Badarka badiyaa iyo khamiirka khamiirka.
Sidoo kale loo yaqaan Riboflavin, waa fiitamiin kan Waxay ku lug leedahay dheef-shiid kiimikaadka tamarta iyo farsamooyinka difaaca antioxidant.
Waa run in fardaha calaamado gaar ah oo ay keeneen yaraantooda aan laga mahadcelin, laakiin waxaa jiray kiisas conjunctivitis oo ka mid ah astaamaha.
Waxaan ka heli karnaa gudaha fiirsashada weyn ee digiraha, tusaale wanaagsan waa alfalfa, iyo sidoo kale qaar ka mid ah dalagyada in kasta oo xoogaa yar la fiirinayo.
Faytamiin C ama ascorbic acid wuxuu muhiim u yahay howlaha antioxidant Maaddaama ay ilaalineyso unugyada neef-mareenka, sidaas darteed waa muhiim in laga hortago cudurrada neef-mareenka iyo in la yareeyo daalka jimicsiga.
Fardo ayaa ku milmi kara fitamiinkan gulukooska.
Waa wax xiiso leh in la siiyo nafaqeyn fiitamiinadan ah markii fardaheennu ay ka weyn yihiin 20 sano, ay soo mareen hawlo neefsasho oo xannibaya ama howlo gaar ah.
Fiitamiinkan waxay ka caawisaa soo-saarista, sharciyeynta iyo soosaarida kalyaha ee kalsiyum iyo fosfooraska, marka lagu daro abaabulka labadaba lafaha.
Yaraansho fiitamiinkan waxay u horseedi kartaa cilladaha lafaha yaraanta kaalshiyamka iyo fosfooraska. Halka xad-dhaaf ah waxay sababi doontaa calcategoriyada nudaha jilicsan.
Faytamiinkan waxaa soo saari kara maqaarka fardaha ka dib markay u dhacdo qorraxda.
Haddii lagu siiyo nafaqo, waa ku habboon tahay in la siiyo kalsiyum iyo fosfooraska marka loo eego saamiga 1.5 ilaa 2 qaybood oo kaalshiyam ah ilaa 1 oo fosfooraska ah.
Si weyn loogu yaqaanay shaqada antioxidant. Faytamiinkan wuxuu difaacayaa dufanka xuubka unugyada iyo muruqyada, isagoo ka ilaalinaya inay oksidheeyaan. Waxay sidoo kale faragelisaa jawaab celinta difaaca jirka iyo dheef-shiid kiimikaadka. Sidaa darteed waxay kaa caawineysaa yareynta qallafsanaanta waana mid aad u weyn lagula taliyay fardaha tartanka.
Yaraansho fitamiin E waxay sababi karaan cuduro kala duwan sida cudurka muruqa cad ee foals ama cudurka lafdhabarta oo xumaada.
Xagee laga helaa? noocyo badan oo cunto ah sida cawska cusub, cowska cagaaran ee urursan, iyo uruurinta dalagyada oo kayar. Dhirtu waxay leedahay xoog badan oo fiitamiin E ah markay yartahay.
Faytamiin E, oo ay weheliso selenium, ayaa la qaadan karaa si looga hortago waxyeelada oksida ee unugyada.
Waa in lagu xisaabtamo in selenium uu sun noqon karo, laakiin tan waa inaan siino xoolaheena dhowr maalmood iyo qadar aad u badan. Sidaa darteed way adagtahay in faras lagaarsiiyo. Xitaa iyada oo wax walba, oo waxaan ku celin doonaa dhowr jeer inta lagu jiro maqaalka, furaha ayaa ku jira dheelitirka cuntada xayawaanka iyo nafaqada la siinayo haddii loo baahdo.
Fiitamiinkan Waxaa loo isticmaalaa jiilka unugyada dhiigga cas, ee howlaha xinjirowga, sidoo kale tan waxaa loogu yaqaan fitamiin anti-hemorrhagic.
Waa dhif iyo naadir in la helo cilladaha fiitamiinkan sidaa darteedna kama hadli karno cawaaqibkiisa.
Forages-ku wuxuu leeyahay qaddarin fara badan fiitamiinkan inkasta oo sidoo kale laga heli karo badarka.
Macdanta ayaa ka mid ah kooxaha lagama maarmaanka u ah nafaqooyinka ay u baahan yihiin isku midkeennu. Waxay lagama maarmaan u yihiin koritaanka lafaha iyo horumarka, marka lagu daro, waxay mas'uul ka yihiin wareegga habboon.
Macdanaha lagama maarmaanka u ah cuntada fardahayagu waa:
Calcio, inuu yeesho qaab dhismeedka lafta iyo ilko xoog leh iyo howlaha saxda ah ee dhiigga iyo muruqyada.
Sodium chloride, lagama maarmaanka u ah dheecaannada jirka iyo dhiigga.
Cobalt, loogu talagalay soo saarista fiitamiin b12.
Copper, aasaasi ah oo ay weheliso birta.
Fosfooras, dheelitirka saxda ah ee kalsiyum iyo hagaajinta unugyada.
Hierro, sameynta haemoglobin. Ka taxaddar sida isticmaalka qaldan ee kaabis birta ay sun u noqon karto.
Iodine, wuxuu caawiyaa shaqada saxda ah ee qanjirka 'thyroid'.
Magnesio, murqaha jirka iyo horumarka saxda ah ee qalfoofka.
Manganese, muhiim u ah shaqada taranka iyo qaab dhismeedka lafaha.
Kaliumpermanganat, oo muhiim u ah unugyada dhiigga cas iyo unugyada muruqyada, iyo sidoo kale dheef-shiid kiimikaad-karbohidratka.
Sidee loo ogaadaa haddii faraskeenu u baahan yahay fitamiin?
Midda ugu horreysa waxa weeye in la fiiriyo cuntada xayawaankeenna, la falanqeeyo waxa uu cuno iyo nafaqooyinka uu bixiyo. Si tan loo gaaro, waxaan fiiro gaar ah u yeelan doonnaa macluumaadka nafaqada ee ay bixiso soo saaraha quudinta, iyadoo la tixgelinayo doorsoomayaasha galmada, cabirka, da'da, iwm. ee sinnaan kasta.
Haddii cuntada la siinayo kalluunkeennu isu dheellitiran yahay, waxay u badan tahay inaysan u baahnayn wax dheeri ah oo dheeri ah marka laga reebo daqiiqado aad muhiim u ah shaqo adag, jimicsi badan ama dhibaatooyin caafimaad.
Majiraan qaab sax ah oo fardaha ah, maxaa yeelay xayawaan waliba waa mid gaar ah oo leh duruufo iyo baahiyo u gaar ah. Sababtaas awgeed, waxaannu xoogga saareynaa muhiimadda ay leedahay in lala tashado dhakhtar xoolaha ku takhasusay.
Haddaan qaar kula talin karno tilmaamaha guud:
para fardo isboorti, Tusaale ahaan, isaga qaadashada fitamiinku waa inay noqotaa mid aad u dhameystiran.
En fardo badanaa ku jira xerooyinka, nafaqooyinka ay ka helaan cawska iyo alfalfa waxay u muuqdaan inay sabool yihiin. Xaaladahan, fitamiin dheeraad ah ayaa si weyn loogu talin karaa.
Wixii foals waa lagama maarmaan inay leeyihiin cunto iyaga siisa fiitamiinada A, C iyo D marka lagu daro kaalshiyamka iyo fosfooraska. Dhinaca kale, gudaha fardaha dadka waaweyn, marka lagu daro seddexdii fiitamiin ee hore, zinc aad bey muhiim u tahay.
ka fardo si xor ah u daaqi kara uma baahna kaabis dheeri ah marka laga reebo xilli cayiman oo tartan ama shaqo ah.
Khaladka guud wuxuu caadi ahaan noqdaa in la siiyo kaabis lagu xalliyo dhibaato gaar ah sida biotin oo loogu talagalay koofiyadaha. Si kastaba ha noqotee, dhammaan nafaqooyinka waa isku xiran yihiin markay wada shaqeeyaan. Taasi waa sababta aan u xoojineyno muhiimadda ay leedahay cunno sax ah oo dheellitiran. Iyo, haddii ay noqoto mid dheeri ah oo lagama maarmaan ah, ka hor doorto xulashooyinka na siinaya isku darka fiitamiinnada iyo macdanta.
Iyo wixii ka sarreeya, ha ku khaldamin inaad faraskeena siiso waxyaabo dheeri ah oo dheeri ah maadaama aan aragnay inay waxyeello yeelan karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Fiitamiinnada iyo nafaqooyinka fardaha
Waxaan u raadinayaa fiitamiin fardo, iyagu waa caato yar yihiin waana tabar daranyihiin, waxaan hayaa ari yar oo uur leh iyo mid uur leh.
Jawaab José Antonio
Fardaha Hanoverian, mid ka mid ah noocyada boodboodka ugu weyn
Faraska Ardennes, waa mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn